အိမ်သုံး Router / Wireless နဲ့ လုံခြုံရေး - MYSTERY ZILLION
မူလ › Daily Life › Internet Security ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
အိမ်သုံး Router / Wireless နဲ့ လုံခြုံရေး
brb_1984 July 2009 edited March 2011 in Internet Security ဒီနေ့Router ရဲ့ Firewall နဲ့ ပက်သက်တာ မေးမြန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ကွန်ပျူတာရဲ့ IP Address ကိုသိရုံနဲ့ Connection ကျအောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဟက်ကာ ဒါတွေကြောင့် ဒီပို့စ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။MMSO မှာ brb တင်ထားပြီးသား ပိုစ်တစ်ခုကိုပါ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သာမာန်ထက် လုံခြုံစိတ်ချရသော အိမ်သုံး Wireless တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်...ဒါကတော့ မိမိရဲ့ အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံး Wireelss Access Point တွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရ အောင် နည်းလမ်းတစ်ချို့ပါ။၁။ Wireless Router or Access Point ရဲ့ မူလနေရာတွင်Wireless Router ဒါမှမဟုတ် Wireless Access Point တိုင်းမှာ Administrator တစ်ယောက်အနေနဲ့ Device Configuration Setting တွေကို ပြင်ဆင်လို့ရအောင် manufacture setting အနေနဲ့ user name = admin , password = admin နဲ့ Wireless Access Password အနေနဲ့ WEP protect လုပ်ထားရင် passsword = aabbccddee စသည့်ဖြင့် အသုံးပြုသူအနေနဲ့ လွယ်ကူအောင် Factory Default တွေသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သာမာန် ကွန်ပျူတာကို တပ်ဆင်အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ အင်တာနက်ကို တန်း၀ယ် ကောက်ဆင်လုပ်တတ်တဲ့အတွက် ဒီ Setting နှစ်ခုကို protect လုပ်ဖို့ သတိမရကြပါဘူး။ တစ်ချို့ Technician တွေအနေနဲ့လည်း ပြီးရင်ပြီးရော password ရှိတာပဲ ဆိုကာ ဒီအတိုင်းပဲ ထားခဲ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကွန်ပျူတာ အနည်းငယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ သူတွေက သူတို့ရဲ့ Notebook ကိုဖွင့်က အနီးအနားက Wireless ကိုဖမ်းတဲ့အခါ တစ်ချို့ Device တွေက Factory Default တွေပါ။ ဆိုလိုတာက Aztech ဆိုရင် SSID မှာ aztech , D-link = d-link နဲ့ Linksys ဆိုရင် linksys စသည်ပေါ့။ ဒီလို ပေါ်နေပြီဆိုရင် ၉၀% ကတော့ သူတို့ ဒီ router / ap ရဲ့ default ကိုမပြောင်းရသေးပါဘူး။ wireless ရဲ့ password ကိုမပြောင်းရသေးမှတော့ Device ရဲ့ administrative password ကိုလည်း မပြောင်းရသေးတာသေချာပါတယ်။Administrator password နဲ့ Wireless Password ကိုပြောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ဒါက အဓိက။၂။ Don't broadcast your SSID (Service Set IDentifier)ဒါကတော့ အခုနောက်ပေါ်တဲ့ Access Point တစ်ချို့ (အကုန်လုံးနီးပါး) မှာပါတဲ့ Function တစ်ခုပါ။ Linksys ရဲ့ WAP54G ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သူက အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ AP နဲ့ Router Device တွေကို ရှာဖွေကာ AP to AP , AP to Router ချိတ်ဆက်တာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဒါလေးက On နေတတ်ပါတယ်.. ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ တစ်ခြား AP or Router နေရာကနေ Signal ကိုယူက Network Traffic ကို sniffing လုပ်နိုင်ပါတယ်.. အသုံးမလိုက ပိတ်ထားပါ။၃။ WPA/WPA2 ကို WEP အစားသုံးပါ။WPA (Wi-Fi Protected Access WEP) ဆိုတာ WEP (Wired Equivalent Privacy) ထက်ပိုပြီး လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ WEP password သာပေးထားရင် ဟက်ကာ မဟုတ်လည်း Hacking Tool တွေနဲ့ ဟက်ရင် ၅ မိနှစ်မကြာပါဘူး။ WPA ကိုကော ဟက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ ရတော့ရတယ်.. ခက်တယ်။၄။ MAC filtering လုပ်ခြင်းMAC (Media Access Control) ဆိုတာကတော့ Network Adapters / Network Interface Cards (NICs) တိုင်းမှာပါတဲ့၄င်းတို့ရဲ့ Manufacturer for Identification ပါ။ Character ၁၂ ပါတဲ့ မတူညီ အမှတ်ပါ။ MAC filtering Setting ကိုသွား၍ မိမိတို့ရဲ့ MAC ကိုကြိုတင် Reserved လုပ်ခြင်းဖြင့် Network Security ကိုပိုပြီး စိတ်ချစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက Private အတွက်ပါ။၅။ Remote Administration ကို ပိတ်ခြင်းပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Remote Access ကို Wireless Device တော်တော်များများမှာ ပိတ်ထားတတ်ပါတယ်။ Remote Administration ဆိုတာကတော့ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် မိမိရဲ့ အိမ်၊ ရုံးက Router ရဲ့ Configuration Setting တွေကို ပြုပြင်လို့ရတဲ့ advanced management setting တစ်ခုပါ။ဒါလေးကို လည်း Check ဖို့မမေ့ပါနဲ့။-----------------------------*-----*-------------------------------ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ Hardware/Software တွေရဲ့ ဟာကွက် vulnerabilities တွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ဟက်ကင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာတို့၏ 90% ဟာ နေ့မခြားပဲသိမှပါ။ သူများရှာထားတဲ့ ဟက်ကင်း technic တွေကိုနောက်ကျမှသိရခြင်း၊ နာရီခြား၊ ရက်ခြား သွာတာနဲ့ ၄င်း hacking technic / hacking tool ကိုအသုံးပြုဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။ ဘယ်တော့မှ အသုံးပြု၍ ရမည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့် ဟက်ကာဖြစ်ချင်တဲ့ သူတွေ၊ Hacking ပညာကိုလေ့လာချင်တဲ့သူတွေကို Hacking Tool တွေမရှာခိုင်းတာပါ။ Hacking Tool တွေရှာမဲ့အစား ကိုယ်ပိုင် penetration testing တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ, vulnerable တွေကိုဘယ်လိုရှာရသလဲဆိုတာကို အရင်လေ့လာပါ။ Keylogger/ Fake Login သုံးပြီး ကွန်ပျူတာ noobs တွေကိုဟက်ကာ ငါကွဟက်ကာလို့တော့ ထမအော်နဲ့:68:(Sorry ပြောနေတာနဲ့ လိုရင်းမရောက်တော့ဘူး)ဒီတော့ Router (Wired or Wireless) ကိုဟက်တယ်ဆိုတာ ဟက်တတ်ရင်လွယ်ပါတယ်။ မဟက်တတ်ရင်ခက်ပါတယ်။ (လူဗိန်းအတွေး၊ အပြောပါ)Router ကိုဟက်ဖို့ဆိုတာ သာမာန်ဟက်ကာ တွေအနေနဲ့ တော်တော်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။2008 ကလို US Military Gov ကို တရုတ် ဟက်ကာတွေက Rookits ထည့်သုံးထားတဲ့ Cisco Router သုံးက ၀င်ရောက်မွေနှောက်ပါတယ်။ ဒါကလည်း US Gov ရဲ့ Cisco Router Supplier တွေက စျေးသက်သာရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီး သုံးတာကိုး။(ဟက်ကာဖြစ်ချင်သူတွေ အဲ့လိုလုပ်ဖို့ ငွေအင်အား လူအင်အား ဘယ်လောက်လိုမယ်ဆိုတာကို ကြည့်ပါ)အခုအချိန်အထိလည်း နာမည်ကြီး Network Brand ဖြစ်တဲ့ Cisco Routers တွေဆို vulnerable တွေ့တယ် ပြင်တယ် တွေ့တယ်....တွေ့တယ် ပြင်တယ်... ဟက်ကင်း သံသရာပါ...သာမာန် Router တစ်ခု ဥပမာ-Zyxel P-320WD-Link DIR-655Linksys WRT54G (ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က vulnerable ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Router- အခု upgrade လုပ်ပြီး)ယခုအချိန် ဒီ Router ရှေ့သွားထိုင်ပြီးတော့ ကျကျနနထိုင်ပြီး ဟက်ပါ။ လွယ်ပါမလားလို့။သူတို့မှာ Built-in Firewall, Access Policies တွေရှိပါတယ်။ ထိုင်ပြီးတော့ Brute Force နဲ့တိုက် လူအိုသွားမယ်။ (ဒါက သာမာန်ဟက်ကာတွေအတွက်ပါ)မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပြတာ။ မရဘူးလို့မပြောဘူး။ (နည်းပညာမှာ ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်မတူဘူး- ဟက်လို့မရရင် ဟက်ကင်း ဆိုတာ ဖြစ်မလာသလို - ကာကွယ်လို့မရင်ရင်လည်း security ဆိုတာပေါ်မလာဘူး)ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် လည်း တစ်ချို့အွန်လိုင်းက တွေ့တဲ့ ဟက်ကင်းနည်းတွေ၊ ဟက်ကင်း tutorial တွေကိုလေ့လာတယ်။ စမ်းသပ်တယ်.. စမ်းသပ်လို့မရင် ဒီ technic အသုံးမ၀င်။ ဒါကိုပယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနည်းပညာကို အခြေခံတဲ့ နောင်လာလတ္တံသော အသစ်အဆန်းတွေကို ရှာဖွေ၊ ဖန်တီးတယ်။နောက်တစ်ခု အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ Router တွေတိုင်းမှာတော့ user အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် factory default setting တွေရှိတယ်။ (ကြားဖြတ်အနေနဲ့ - Wordpress မှာ database prefix wp_ နဲ့ admin default username ကိုပြောင်းဖို့ Security ပိုင်းဆိုင်ရာက recommend လုပ်သလိုပေါ့)။ဟက်ကာတွေမဟက်ခင် အရင်ဆုံး pentest လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ basic ကလုပ်တယ်။ XSS, CSRF တွေ brute force စသည်ဖြင့်ပေါ့ ဒါတွေနဲ့ ဟက်ချလောင်းဆိုပြီး တမ်းမလုပ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ target - ကိုဖောက်ဖို့အတွက် victim ရဲ့ default setting ကိုအမြဲရှာတယ်။Default setting မှာဘာဟာကွက်တွေတွေ့မလဲဆိုတာကို အရင် စစ်တယ်။ဒါက Router တွေရဲ့ Default Setting ပါ။ (တင်လိုက်ပါသေးတယ်..ဒါပေမဲ့ List များတော့ တင်လို့မရဘူး။ Security Override မှာသွားကြည့်ရန်.. &#91;URL=\_&quot;http&#58;//securityoverride.com/?page_id=487\_&quot;&#93;Default Password List&#91;/URL&#93;ဒါကြောင့် မိမိ Network/ မိမိ ကွန်ပျူတာရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ Router အပေါ်မှာလည်း တစ်ပိုင်းတစ်ဏ္ဍ ပါ၀င်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ Security Policy သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသော Router နဲ့ Network ဟာ လုံခြုံမှု့ အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လုပ်ငန်းအရေးကြီးလေ ကောင်းမွန်တဲ့ Network Security Firewall တစ်ခုလောက်တော့လိုပါလိမ့်မယ် ဥပမာ - D-Link DFL-210 စသည်ပေါ့။ထပ်လောင်းပြီး ပြောပါရစေ မိမိတို့ရဲ့ အိမ်သုံး Router နဲ့ Access Point / Modem တွေကို ထိုက်သင့်တဲ့ ကာကွယ်မှု့လေးတွေပေးထားပြီလားဆိုတာကို ဒီ post ကိုဖတ်ပြီးပြီးခြင်း ကြည့်ပါ။၀န်ခံချက်။ brb ရေးတာ မနိုင်းနိုင်းစနေလို အရေးအသားမကောင်းတော့ တောင်ရောက်၊ မြောက်ရောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်.... နားလည်သလိုဖတ်ပါ။ နားမလည်တာကို သိသလောက်ထပ်ပြီး ရှင်းပြပေးမယ်.. မှတ်ချက်များ
Cyberhack July 2009 edited July 2009 Registered Users password ခံရင် အများအားဖြင့် wireless ရဲ့ ဆွဲအားနဲ့ password ကို encrypt လုပ်ပြီးသွားကတာ ကွန်နက်ရှင်ကို အများကြီးထိခိုက်ပါတယ်... ကျွန်တော်အဲလိုတွေးရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး တက်လာတဲ့ သူကို MAC ကို ဘန်းမယ်လုုပ်ဘူးပါတယ်.. လုံး၀မဖြစ်နိုင်ပါဘူး... တက်လာတဲ့ သူက လဲ တစ်ခါတက်ရင် တစ်ခါ MAC ကို ချိန်းပါတယ်... သူက ရှေ့သုံးလုံးကိုချိန်းတာမဟုတ်ဘူး... နောက်သုံးလုံး product ကိုချိန်းတာပါ.... အခုထားတာကတော့ WAP ကိုထားထားတယ်.. ဘယ် security ကspeed ကိုနည်းနည်း တိုးအောင်လုပ်နိုင်လည်းဗျာ.... လုပ်ပါဦး ..... တစ်ကယ်လို့ အဲဒါပါကျော်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အလကားပဲပေးသုုံးတော့မယ်စဉ်းစားထားတယ်......... အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ် security ကိုပေးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မလဲ.. WEP ကလွယ်တော့လွယ်မယ် ဟတ်ကတာ ဒါပေမဲ့ သူလဲ end user တော့မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးထင်တာပဲ.... ဒါမှမဟုတ် router မှာ ဒီ MAC ပဲသုံးတာ ရမယ်ဆိုပြီးထည်ရင်တော့ကောင်းတယ် ခဏခဏမပြောင်းချင်ဘူး... နောက် WAP personal နဲ့ WAP enterprise ကဘယ်လို ကွာခြားလဲ ... ကျွန်တော်လဲ မသိဘူး.... နောက် encrypt မှာလဲ TKIP နဲ့ AES ကကော့ ဘာတွေကွာခြားလဲဗျာ.. ကျွန်တော်ကတော့ ရှာမဖတ်တော့ဘူး တွေ့တဲ့ ဟာနဲ့ပေးပေးလိုက်တယ်.... SSID ကို Disable လုပ်လဲ သိပ်မထူးဘူး.... subnet ခွဲပြီး IP ကို manual ပေးမယ်ဆိုရင်ကော... လုပ်ပါဦး Yaung Sein July 2009 edited July 2009 Registered Users Cyberhack;45588 said:password ခံရင် အများအားဖြင့် wireless ရဲ့ ဆွဲအားနဲ့ password ကို encrypt လုပ်ပြီးသွားကတာ ကွန်နက်ရှင်ကို အများကြီးထိခိုက်ပါတယ်... security ကို ပေးရင် ကွန်နက်ရှင် performance ကိုကျသွားနိုင်မှန်း ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ဆီမှာ WAP/PSK2နဲ့ clipper TKIP ကိုသုံးတာတော့ ပုံမှန်လိုပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ DI-724GU ကိုသုံးပါတယ်။ brb_1984 July 2009 edited July 2009 Registered Users, Moderators WEP ကစပြောပါ့မယ်.. Wired Equivalent Privacy (WEP) ဆိုတာက IEEE 802.11 standard Device တစ်ခုဖြစ်တယ်.. ၄င်းမှာ ASCII passphrase သို့မဟုတ် Hexidecimal ပုံစံ password ကို အသုံးပြုပြီး တစ်ချို့ Device တွေက ASCII passphrases ကိုသုံးလျင် အဆင်မပြေတဲ့ အတွက် များသောအားဖြင့် Hexadecimal version ဖြစ်တဲ့ WEP ကိုသုံးတယ်... ဆိုလိုတာက Password ကို(0to 1,ato f).WEP uses the RC4 encryption algorithm နဲ့ ၄င်းကို WEP algorithm ရဲ့ မလုံခြုံမှု့နဲ့ အားနဲမှု့တွေကတော့ * Passive attacks to decrypt traffic based on statistical analysis. passive active ဆိုတာကတော့ active attack လိုမျိုး ကြားခံမီဒီယာ အသုံးနည်းတယ်.. (ဥပမာ -atobconnection မှာ h က ကြားခံ traffic listening လုပ်ကာ ၀င်ရောက်ခြင်း, attacking knows as eavesdropper) * Active attack to inject new traffic from unauthorized mobile stations, based on known plaintext. Active attack ဆိုတာ data sniffing လုပ်ဖို့ Physical ဆိုင်ရာ attacking device တွေလိုမယ်...(ဥပမာအနေနဲ့ keylogger device ကိုကွန်ပျူတာမှာ ခံသုံးသလိုပေါ့- network cable တွေနဲ့ ကြားခံမီဒီ တွေလိုအပ်သည်။) * Active attacks to decrypt traffic, based on tricking the access point. * Dictionary-building attack that, after analysis of aboutaday's worth of traffic, allows real-time automated decryption of all traffic. ဒါကတော့ Brute Force လိုပြောရင်ပိုမှန်မယ်... (Dictionary ကိုအခြေခံတဲ့ တိုက်ခိုက်မှု့တစ်မျိုးပဲ)WEP ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပြုပြင်ဖို့ WiFi Protected Access (WPA) ဆိုတဲ့ security protocol တစ်ခုကို ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး 802.11i အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။WPA ဆိုပေမဲ့ WPA and နောက်ပေါ်တဲ့ WPA2 လို့ပြောမယ်...WPA မှာ TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (၄င်းကို keystream recovery attack လို့ခေါ်တဲ့ နည်းနဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်)WPA2 မှာ AES (Advanced Encryption Standard) ( နောက်ပေါ်မှတော့ အရင်ထက် security ပိုဖြည့်ထားတာပေါ့)WPA မှာ ပါတဲ့ TKIP or AES နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ တူပါတယ်.. မိမိရဲ့ System ကို mixed လုပ်ပေးခြင်းပါ။WPA မှာပါတဲ့ pre-shared key mode (PSK- တနည်းအားဖြင့် personal mode) က Wireless Network Encrytion အနေနဲ့ 256bit ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ WPA enterpise ကတော့ ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မကိုင်တွယ် ၊ မစမ်းသပ်ဖူးတော့ မပြောပြတတ်ဘူး။ (နောက်တွေ့မှ ပြောမယ်)မိမိအရင်သုံးနေကြ Wireless AP or Router က WEP setting ဆိုရင် အမြန်ဆုံးပြောင်းလိုက်ပါ။ ဟက်ကာမဟုတ်လည်း Hacking Tool တွေနဲ့ manual ကြည့်က ဟက်လို့ရတယ်...WPA ကိုတော့ ဟက်ဖို့နည်းနည်းခက်မယ်။ ဒီတော့ WPA2 ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ၄င်းမှာ AES သို့မဟုတ် TKIP ဆိုပြီးပါ ပါလိမ့်မယ်.. ဒါက WPA နဲ့ WPA2 ကိုပေါင်းစပ်ပေးတာပါ။WEP ကို ဟိုးအရင် 802.11 device တိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့ WPA2 မှာဆိုရင်တော့ တစ်ချို့ 802.11 device တွေ သုံးရတာ အဆင်မပြေပါ။ WPA2 က အထူးသဖြင့် 802.11 g/n support လုပ်တဲ့ device တွေပဲ အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်... PDA နဲ့ WiFi Mobile တွေက များသောအားဖြင့် 802.11b ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် WPA2 သုံးထားရင် connect လုပ်လို့မရပါ။ justinliu August 2009 edited August 2009 Registered Users wireless router နဲ computer က IP တူနေလို့ တဲဗျာ Wireless Router ကို password ပေးထားလို့ မရဘူး password ပေးလိုက်ရင် wireless က သုံးလိုမရ တော့ဘူးဗျ ဘာဖြစ်နေလဲ မသိဘူး MZ က အကိုများကူညီကြပါဗျာ matrix August 2009 edited August 2009 Registered Users justinliu;50394 said:wireless router နဲ computer က IP တူနေလို့ တဲဗျာ Wireless Router ကို password ပေးထားလို့ မရဘူး password ပေးလိုက်ရင် wireless က သုံးလိုမရ တော့ဘူးဗျ ဘာဖြစ်နေလဲ မသိဘူး MZ က အကိုများကူညီကြပါဗျာ
You should change your PC's IP Address, :) nawaung September 2009 edited September 2009 Registered Users ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်..ဆိိုင်မှာ က wireless ဖွင့်ထားပါတယ်အိမ်ကနေသုံးချင်တယ် အဲ့ဒါ နေရာက ေ၀းတယ်ဗျလှည်းတန်းနဲ့ဆင်ရေတွင်းလောက်ေ၀းတယ်ဖြစ်နိုင်မလား..ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစောင့်နေတယ်ဗျာ ဖြေပေးပါဦးနော် matrix September 2009 edited September 2009 Registered Users nawaung;55662 said:ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်..ဆိိုင်မှာ က wireless ဖွင့်ထားပါတယ်အိမ်ကနေသုံးချင်တယ် အဲ့ဒါ နေရာက ေ၀းတယ်ဗျလှည်းတန်းနဲ့ဆင်ရေတွင်းလောက်ေ၀းတယ်ဖြစ်နိုင်မလား..ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစောင့်နေတယ်ဗျာ ဖြေပေးပါဦးနော်
WiFi က ထ AP နဲ့ ပေ သုံးရာ ပတ်လည်ပါ..ဒီတော့ စဉ်းစားပေါ့... Yaung Sein September 2009 edited September 2009 Registered Users nawaung;55662 said:ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်..ဆိိုင်မှာ က wireless ဖွင့်ထားပါတယ်အိမ်ကနေသုံးချင်တယ် အဲ့ဒါ နေရာက ေ၀းတယ်ဗျလှည်းတန်းနဲ့ဆင်ရေတွင်းလောက်ေ၀းတယ်ဖြစ်နိုင်မလား..ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစောင့်နေတယ်ဗျာ ဖြေပေးပါဦးနော်
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Directional Antenna တော့လိုမယ်ဗျ။ AP to AP (Bridge Mode) ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်။ ဆိုင်နဲ့အိမ်နဲ့ Line of site ဖြစ်ဖို့လဲလိုလိမ့်မယ်။ တနည်းပြောရရင် ဆိုင်က antenna နဲ့ အိမ်က antenna ကြားမှာဘာမှမရှိဖို့လိုမယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် bro လိုချင်တဲ့အကွာအဝေးကသာလေးရနိုင်ပါတယ်။ ဝါသနာပါရင် Wi Fi Antenna လုပ်နည်းတွေကို အင်တာနက်မှာရှာကြည့်လိုက်ပါဗျာ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ့်ပုံစံကို စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သေသေချာချာ တိတိကျကျ လုပ်နိုင်ရင် ၁မိုင်လောက်ကတော့အသာလေးရနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းထားတဲ့သူတွေပြောတာက ၅မိုင်ထိရောက်ပါတယ်တဲ့ အဲဒါ ရိုးရိုး SOHO Wi-Fi Router နဲ့ပဲနော်။ matrix September 2009 edited September 2009 Registered Users Yaung Sein;55675 said:ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Directional Antenna တော့လိုမယ်ဗျ။ AP to AP (Bridge Mode) ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်။ ဆိုင်နဲ့အိမ်နဲ့ Line of site ဖြစ်ဖို့လဲလိုလိမ့်မယ်။ တနည်းပြောရရင် ဆိုင်က antenna နဲ့ အိမ်က antenna ကြားမှာဘာမှမရှိဖို့လိုမယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် bro လိုချင်တဲ့အကွာအဝေးကသာလေးရနိုင်ပါတယ်။ ဝါသနာပါရင် Wi Fi Antenna လုပ်နည်းတွေကို အင်တာနက်မှာရှာကြည့်လိုက်ပါဗျာ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ့်ပုံစံကို စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သေသေချာချာ တိတိကျကျ လုပ်နိုင်ရင် ၁မိုင်လောက်ကတော့အသာလေးရနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းထားတဲ့သူတွေပြောတာက ၅မိုင်ထိရောက်ပါတယ်တဲ့ အဲဒါ ရိုးရိုး SOHO Wi-Fi Router နဲ့ပဲနော်။
ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာလုရဲ့Wi-Fi နဲ့ WiMAX ကိုမမှားပါနဲ့....Standard အတွက် Wi-Fi ကို ၁၀၀ မီတာStardard အတွက် WiMAX ကို ၅ မိုင်လောက် အထိသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်..Wi-Fi (Wireless Fidelity) ကို 310 - 382KM အထိ Antena တွေနဲ့ ဆန့်ထုတ်လို့ရတာတော့ မှန်ပါတယ်... (ဒါက Non Standard Device တွေပါ)ဒါပေမဲ့လည်းကွယ်... ဒေါ်လာ ၆၀ တန် Standard Wireless AP တစ်ခု၀ယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ၄င်းအတွက် 7db ရှိတဲ့ gain antenna တစ်ခုကို ဒေါ်လာ ၄၀ လောက်ပေးရပါတယ်.. Wi-Fi 802.11n ကိုသုံးတဲ့အတွက် သူဟာ အလွန်ဆုံး 150 မီတာလောက်ပဲ Extend လုပ်ပါလိမ့််မယ်... (မလုံလောက်ဘူးပေါ့)800db ရှိတဲ့ Hide Gain Antenna တစ်ခုဆိုရင်လည်း ကားတစ်စီးလောက်တော့ ၀ယ်နို်င်ကောင်းပါရဲ့.. :DWi-Fi မှာ LAN နဲ့ WAN ဆိုပြီးရှိပါသေးတယ်..LAN Wi-Fi မှာ ၁၀၀ မီတာ (Out Door) ပဲ Standard Wi-Fi Device ဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။WAN Wi-Fi ကိုတော့ Muni Wi-Fi လို့ခေါ်ပါတယ်... GPRS В· WiMAX В· UMTS, HSPA စသည်တို့ပုံစံအနေနဲ့ သုံးတယ်... ဒါကြောင့် Muni Wi-Fi မှာ Standard Wi-Fi မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Predefined HGA ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့လို Local Wi-Fi ကိုသုံးပြီး လှည်းတန်းနဲ့ဆင်ရေတွင်းလောက်ေ၀း တဲ့နေရာဆိုရင်Muni Wi-Fi ကိုသုံးပါ... (စျေးကတော့ Standard AP ၁၀ လုံးစာလောက်တော့ အနည်းဆုံးရှိတာပေါ့နော်)ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Wi-Fi နဲ့ Public မှာ Hot Spot ပေးသုံးကြတဲ့ Starbucks စသည့် Free Service တွေဆိုရင်လည်း Plaza တစ်ခုတောင်မရပါဘူး။အဲ လုပ်ချင်လို့ 310 - 382KM လောက် ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ... ကဲ မိတ်ဆွေ.. ရန်ကုန်မြို့တွင်းအတွက် Wireless Wi-Fi Service Provider သာ လုပ်ပါတော့။ nawaung September 2009 edited September 2009 Registered Users [quote=matrix;55677]ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာလုရဲ့wi-fi နဲ့ wimax ကိုမမှားပါနဲ့....Standard အတွက် wi-fi ကို ၁၀၀ မီတာstardard အတွက် wimax ကို ၅ မိုင်လောက် အထိသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်..wi-fi (wireless fidelity) ကို 310 - 382km အထိ antena တွေနဲ့ ဆန့်ထုတ်လို့ရတာတော့ မှန်ပါတယ်... (ဒါက non standard device တွေပါ)ဒါပေမဲ့လည်းကွယ်... ဒေါ်လာ ၆၀ တန် standard wireless ap တစ်ခု၀ယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ၄င်းအတွက် 7db ရှိတဲ့ gain antenna တစ်ခုကို ဒေါ်လာ ၄၀ လောက်ပေးရပါတယ်.. Wi-fi 802.11n ကိုသုံးတဲ့အတွက် သူဟာ အလွန်ဆုံး 150 မီတာလောက်ပဲ extend လုပ်ပါလိမ့််မယ်... (မလုံလောက်ဘူးပေါ့)800db ရှိတဲ့ hide gain antenna တစ်ခုဆိုရင်လည်း ကားတစ်စီးလောက်တော့ ၀ယ်နို်င်ကောင်းပါရဲ့.. :dwi-fi မှာ lan နဲ့ wan ဆိုပြီးရှိပါသေးတယ်..Lan wi-fi မှာ ၁၀၀ မီတာ (out door) ပဲ standard wi-fi device ဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။wan wi-fi ကိုတော့ muni wi-fi လို့ခေါ်ပါတယ်... Gprs В· wimax В· umts, hspa စသည်တို့ပုံစံအနေနဲ့ သုံးတယ်... ဒါကြောင့် muni wi-fi မှာ standard wi-fi မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူက သတ်မှတ်ထားတဲ့ predefined hga ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့လို local wi-fi ကိုသုံးပြီး လှည်းတန်းနဲ့ဆင်ရေတွင်းလောက်ေ၀း တဲ့နေရာဆိုရင်muni wi-fi ကိုသုံးပါ... (စျေးကတော့ standard ap ၁၀ လုံးစာလောက်တော့ အနည်းဆုံးရှိတာပေါ့နော်)ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ wi-fi နဲ့ public မှာ hot spot ပေးသုံးကြတဲ့ starbucks စသည့် free service တွေဆိုရင်လည်း plaza တစ်ခုတောင်မရပါဘူး။အဲ လုပ်ချင်လို့ 310 - 382km လောက် ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ... ကဲ မိတ်ဆွေ.. ရန်ကုန်မြို့တွင်းအတွက် wireless wi-fi service provider သာ လုပ်ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကသိပ်နားမလည်လို့ပါဖြစ်နိုင်ချေရှိရဲ့လား ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်းပြပေးပါလားပစ္စည်း၀ယ်ရမယ်ဆိုလဲဘာ၀ယ်ရမလဲလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲပါပြောပေးပါနော် nawaung September 2009 edited September 2009 Registered Users Yaung Sein;55675 said:ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Directional Antenna တော့လိုမယ်ဗျ။ AP to AP (Bridge Mode) ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်။ ဆိုင်နဲ့အိမ်နဲ့ Line of site ဖြစ်ဖို့လဲလိုလိမ့်မယ်။ တနည်းပြောရရင် ဆိုင်က antenna နဲ့ အိမ်က antenna ကြားမှာဘာမှမရှိဖို့လိုမယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် bro လိုချင်တဲ့အကွာအဝေးကသာလေးရနိုင်ပါတယ်။ ဝါသနာပါရင် Wi Fi Antenna လုပ်နည်းတွေကို အင်တာနက်မှာရှာကြည့်လိုက်ပါဗျာ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ့်ပုံစံကို စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သေသေချာချာ တိတိကျကျ လုပ်နိုင်ရင် ၁မိုင်လောက်ကတော့အသာလေးရနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းထားတဲ့သူတွေပြောတာက ၅မိုင်ထိရောက်ပါတယ်တဲ့ အဲဒါ ရိုးရိုး SOHO Wi-Fi Router နဲ့ပဲနော်။
အစ်ကိုရေပြောပေးပါဦးဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်သုံးတာက linksys wireless-n gigabit routerwrt310nဘာတွေနဲ့သုံးရမလဲပေါ့:((:((:77::77: matrix September 2009 edited September 2009 Registered Users nawaung;55848 said:အစ်ကိုရေပြောပေးပါဦးဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်သုံးတာက linksys wireless-n gigabit routerwrt310nဘာတွေနဲ့သုံးရမလဲပေါ့:((:((:77::77:
WRT310n က Built-in Antenna နော်... မရဘူး..လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် db Gain Antenna တပ်လို့ရတဲ့ D-Link, Aztech, 3Com တို့နဲ့ သုံးတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ Standard Wireless Device တွေ ဆိုရင် မီတာ ၁၅၀ ဆိုတာ အလွန်ဆုံးပဲ.... Yaung Sein September 2009 edited September 2009 Registered Users matrix;55677 said:ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာလုရဲ့Wi-Fi နဲ့ WiMAX ကိုမမှားပါနဲ့....ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်မမှာတာတော့သေချာတယ်ဗျ ဒါတွေက ဝါသနာပါတဲ့သူတိုင်းသိကြတာပဲ။ အင်တာနာကိုလက်တွေလုပ်လို့လဲရတဲ့သူတွေကရကြပြီ။ electronic အကြောင်းတော့သိဖို့လိုတာပေါ့နော် :5: [quote]Standard အတွက် Wi-Fi ကို ၁၀၀ မီတာStardard အတွက် WiMAX ကို ၅ မိုင်လောက် အထိသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်..အဲဒီသတ်မှတ်ချက်တွေက အမေရိကန်နိုင်ငံ FCCအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့် သာမန် Wi-Fi Router တခုဟာ 50mW ထက်မကျော်ပါဘူး အဲဒီ power output နဲ့ သာမန်ပါနေကျ 2dBi အင်တာနာတခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် Indoor မှာ ၁၀၀မီတာဝန်းကျင်နဲ့ Outdoor မှာအကာအဆီးမရှိခဲ့ရင် အဝေးဆုံး ၃၀၀မီတာဝန်းကျင် အထိပဲသွားနိုင်ပါတယ်။ :39:[quote]Wi-Fi (Wireless Fidelity)ကို 310 - 382KM အထိ Antena တွေနဲ့ ဆန့်ထုတ်လို့ရတာတော့ မှန်ပါတယ်... (ဒါက Non Standard Device တွေပါ)electronic device တွေမှာ Standard နဲ့ Non standard Device ဆိုပြီး မရှိပါဘူး။ Interface တွေမှာပဲရှိပါတယ်။ ဘယ်ပစ္စည်းက power ဘယ်လောက်စားတယ်၊ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်၊ စတဲ့ Specification ဆိုတာပဲရှိပါတယ်။ \_:D/[quote]ဒါပေမဲ့လည်းကွယ်... ဒေါ်လာ ၆၀ တန် Standard Wireless AP တစ်ခု၀ယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ၄င်းအတွက် 7db ရှိတဲ့ gain antenna တစ်ခုကို ဒေါ်လာ ၄၀ လောက်ပေးရပါတယ်.. Wi-Fi 802.11n ကိုသုံးတဲ့အတွက် သူဟာ အလွန်ဆုံး 150 မီတာလောက်ပဲ Extend လုပ်ပါလိမ့််မယ်... (မလုံလောက်ဘူးပေါ့)Omni အမျိုးအစားဘယ်ဝယ်မလဲဗျ ဝေးဝေးသွားတာမှမဟုတ်တာပဲ။ Directional အမျိုးအစားကိုဝယ်မှာပေါ့။ ဒီမှာက 12dBi Directional အင်တာနာကို ၉သောင်းလောက်ပေးဝယ်ရင်ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ line of site ဆင်နိုင်ရင် ၁မိုင်လောက်ကတော့ အသာလေးရတယ်ဗျာ။:65:[quote]800db ရှိတဲ့ Hide Gain Antenna တစ်ခုဆိုရင်လည်း ကားတစ်စီးလောက်တော့ ၀ယ်နို်င်ကောင်းပါရဲ့.. :Dဟုတ်ရဲဲ့လားအကိုရယ် အမေရိကန် FCC က 40dBm 10Watt ထက်ကျော်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို public မှာထုတ်ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောထားလို့ပါ။ အကိုပြောတဲ့ Standard လေ။:D Yaung Sein September 2009 edited September 2009 Registered Users nawaung;55848 said:အစ်ကိုရေပြောပေးပါဦးဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်သုံးတာက linksys wireless-n gigabit routerwrt310nဘာတွေနဲ့သုံးရမလဲပေါ့:((:((:77::77:
ကျွန်တော်လက်တွေ့သုံးဖူးတာကတော့ Trandnet AP နဲ့ပဲ စျေးလဲချိုတယ် Performance လဲကောင်းတယ်။ Model ကတော့ TEW-450APB ပါ။ အဲဒီအမျိုးအစား နှစ်လုံးလိုပါမယ်။ Directional အင်တာနာ နှစ်ခုလိုပါမယ်။ 12dBi Directional Antenna ဆိုရင် ၉သောင်းကျော်ကျော်လောက်နဲ့ Myanmar New Technology မှာဝယ်လို့ရတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုရင် ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနာကြိုးကို တတ်နိုင်သမျှတိုတိုထားပါဗျာ။ ရှည်ရင် power lost ကများလို့ပါ။ အင်တာနာ နှစ်ခုကိုမျက်နှာချင်ဆိုင် ထားပါ။ အင်တာနာ တခုနဲ့တခုကြားမှာ အကာအဆီးမရှိဖြစ်နေရပါမယ်။ AP Configuration ကို Bridge mode ကိုထားပြီး AP နှစ်ခုကိုချိပ်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။ :) matrix September 2009 edited September 2009 Registered Users Yaung Sein;56002 said:Omni အမျိုးအစားဘယ်ဝယ်မလဲဗျ ဝေးဝေးသွားတာမှမဟုတ်တာပဲ။ Directional အမျိုးအစားကိုဝယ်မှာပေါ့။ ဒီမှာက 12dBi Directional အင်တာနာကို ၉သောင်းလောက်ပေးဝယ်ရင်ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ line of site ဆင်နိုင်ရင် ၁မိုင်လောက်ကတော့ အသာလေးရတယ်ဗျာ။:65:
မှန်ပါတယ်..ဒါဆိုရင် လှည်းတန်း နဲ့ ဆင်ရေတွင်းအတွက် Wireless LAN မှာ ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ကြည့်ပေးပါ။ဒီကုန်ကျစရိတ် နဲ့ ရလာတဲ့အကြိုးအမြတ်ပေါ့...အဓိကပြောချင်တာက ဆင်ဖိုးထက် ခွှျန်းဖိုးက ပိုပြီးကြီးနေရင် ဘယ် Project မှ မစတာကောင်းပါတယ်... နည်းပညာမှာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ Project တစ်ခုရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကိုအရင်ဆုံးစစ်ကြည့်ပါ။ အသုံးပြုမဲ့ User တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ငန်း နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်... user တစ်ယောက်က အိမ်ကနေပြီးတော့ ရုံးက ပြန်တဲ့အချိန်ပဲ မေးလ်လေးစစ်တယ်.. Gtalk လေးပြောမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ပြောတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ထိုက်တန်ပါ့မလားဆိုတာကိုအရင်ကြည့်ပါ။ဒါက User ရဲ့ ဘက်ကို စစ်တာပါ။user တစ်ယောက်က မေးမယ်.. ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကို သူ့ private အတွက် Fibre Optic လိုင်းသုံးမယ်... လုပ်လို့မရဘူးလား? ရပါတယ်.... လုပ်ပေါ့...ဒါပေမဲ့လည်း အခု ကို nawaung ပြောတာကိုလည်းကြည့်ဦးလေ... သူကဆိုင်က Wireless ကိုသုံးချင်တာလေ... သူက Cooperate အတွက် Wireless Configuration လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သူ့ရဲ့ ဒီ project အပေါ်မှာ သုံးနိုင်မှု့ကိုကြည့်ရသေးတာပေါ့။ minchit January 2011 edited January 2011 Registered Users wireless နဲ့ပါတ်သက်လို့ ဒီမှာပဲ မေးလိုက်ပါရစေ။ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ အရင်က wireless နဲ့ သုံးပါတယ်။ အနီးနား ဆိုင်က မိတာကို pass လည်းရတာနဲ့ သုံးနေတာပါ။ တစ်လောကတော့ သုံးနေတဲ့ wireless adapter က မကောင်းတော့တာနဲ့ အသစ်၀ယ်ပြီး သုံးတော့ roughter ကိုတော့ ချိတ်မိတယ်။ ip လည်းကျလာတယ်။ ဒါပေမယ့် receive က အတက်နည်းပြီး website တွေကို ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့မ၇ဘူး။ signal ကတော့ အရင် wireless adapter လောက်မိပါတယ်။ နှစ်တုံး၊သုံးတုံးပေါ့။ ဒါနဲ့ adapter ကပဲ မိအားနည်းလို့လားဆိုပြီးတော့ သူငယ်ချင်း လက်တော့နဲ့ ဆိုင် ရှေ့ နားမှာစမ်းတော့ လေးငါးတုံးမိတာကို ဘယ်လိုမှ သုံးလို့ မရဘူး။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ဆိုင်က တစ်ခုခုလုပ်ထားပြီထင်ပါတယ်။browser မှာ roughter IP 192.168. .. ကိုရိုက်ပြီး roughter ထဲကို ၀င်ဖို့ ကြိုးစားတော့ password ပေးထားတယ်။ ၀င်လို့ မရတော့ဘူး။ အရင်က သူ့ default ပဲထားတာဆိုတော့ ၀င်လို့ရတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက ချိတ်မိနေရဲ့သားနဲ့ ip လည်း assign ချပေးရဲ့သားနဲ့ သုံးလို့ မရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုများလုပ်ထားတာပါလဲ။MAC Filtering နဲ့ သူ့ဆိုင်က အလုံးတွေပဲ သုံးလို့ ရအောင်လုပ်ထားတာလား။ MAC Filtering လုပ်ထားရင် IP assign ချပေးပါသလား။ သုံးလို့ ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ MZ က အစ်ကိုအစ်များ ဖြေပေးကြပါအုံးခင်ဗျာ။ minchit January 2011 edited January 2011 Registered Users ဖြေပေးပါအုံး အစ်ကိုတို့ရေ... wireless ချိတ်မိနေရဲ့သားနဲ့ IP လည်း ရရဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ််လို့သုံးမရတာလဲ။
minchit;82315 said:wireless နဲ့ပါတ်သက်လို့ ဒီမှာပဲ မေးလိုက်ပါရစေ။ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ အရင်က wireless နဲ့ သုံးပါတယ်။ အနီးနား ဆိုင်က မိတာကို pass လည်းရတာနဲ့ သုံးနေတာပါ။ တစ်လောကတော့ သုံးနေတဲ့ wireless adapter က မကောင်းတော့တာနဲ့ အသစ်၀ယ်ပြီး သုံးတော့ roughter ကိုတော့ ချိတ်မိတယ်။ ip လည်းကျလာတယ်။ ဒါပေမယ့် receive က အတက်နည်းပြီး website တွေကို ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့မ၇ဘူး။ signal ကတော့ အရင် wireless adapter လောက်မိပါတယ်။ နှစ်တုံး၊သုံးတုံးပေါ့။ ဒါနဲ့ adapter ကပဲ မိအားနည်းလို့လားဆိုပြီးတော့ သူငယ်ချင်း လက်တော့နဲ့ ဆိုင် ရှေ့ နားမှာစမ်းတော့ လေးငါးတုံးမိတာကို ဘယ်လိုမှ သုံးလို့ မရဘူး။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ဆိုင်က တစ်ခုခုလုပ်ထားပြီထင်ပါတယ်။browser မှာ roughter IP 192.168. .. ကိုရိုက်ပြီး roughter ထဲကို ၀င်ဖို့ ကြိုးစားတော့ password ပေးထားတယ်။ ၀င်လို့ မရတော့ဘူး။ အရင်က သူ့ default ပဲထားတာဆိုတော့ ၀င်လို့ရတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက ချိတ်မိနေရဲ့သားနဲ့ ip လည်း assign ချပေးရဲ့သားနဲ့ သုံးလို့ မရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုများလုပ်ထားတာပါလဲ။MAC Filtering နဲ့ သူ့ဆိုင်က အလုံးတွေပဲ သုံးလို့ ရအောင်လုပ်ထားတာလား။ MAC Filtering လုပ်ထားရင် IP assign ချပေးပါသလား။ သုံးလို့ ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ MZ က အစ်ကိုအစ်များ ဖြေပေးကြပါအုံးခင်ဗျာ။ Paisoe March 2011 edited March 2011 Registered Users minchit;82328 said:ဖြေပေးပါအုံး အစ်ကိုတို့ရေ... wireless ချိတ်မိနေရဲ့သားနဲ့ IP လည်း ရရဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ််လို့သုံးမရတာလဲ။
ကျွန်တော်နည်းနည်းဖောကြည့်မယ်နော်။wireless ချိတ်မိနေတယ့် IP လည်း ကျတယ်ဆိုရင်တော့ သုံးမယ့် IE or Firefox မှာ proxy ပေးရမယ်ထင်တယ ်။ကြားမှာ ISA server မခံပဲ MPT ကတိုက်ရိုက် proxy ဆိုရင်တော့ no proxy နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။ISA server ခံထားရင်တော့ ISA server IP Address ပေးရတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ ကျလာတဲ့ IP မှာ Gateway ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲဒီ gateway ကို ping လို့ရလားဗျာ။ရရင်တော့ proxy ထည့်ရင်သုံးလို့ရပါတယ်။ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla